Date My Pet » 5 Soso-kevitra Mba ho A Lehibe Voalohany Online Dating Impression
Last nohavaozina: Jan. 13 2021 | 3 min namaky
Rehefa miresaka momba ny fahatsapana voalohany, mihevitra izy ireo avy hatrany endriny-tava fifandraisana. Na izany aza, fotoana efa niova, ary no mianatra voalohany momba izany ihany koa ny mifandray be amin'ny aterineto ... indrindra rehefa aterineto mampiaraka. Ary, ny fitsipika ny tava-tava no mianatra voalohany momba mitovy amin'ny aterineto mampiaraka no mianatra voalohany momba.
Izay ny zava-dehibe ny Fiheveran'ny Olona Ahy: Ny Profile sy ny Email
Raha hifidy ny fiarahana amin'ny aterineto ny fomba nentim-paharazana ny mampiaraka, ny zavatra voalohany tsy maintsy tonga saina no toerana voalohany ny fahatsapana handeha manan-danja. Ary, ny voalohany fahatsapana handeha ho hita ao na ny mombamomba azy sy ny mailaka.
Raha ny ny Profile:
Raha tsy efa fantatrao, ny mombamomba tokony ho tsara sy upbeat - na inona na inona izay mampiseho fa manirery ianao na mamoy fo (lehibe kosa ho an'ny vehivavy eny-). Azonao atao ihany koa mba ho azo antoka izany mijanona amin'izao fotoana izao, izany vaovao farany izany matetika raha toa ka mila (na rehefa Efa niova ny tany amin'ny fiainanao). Aoka antoka fa famaritana momba ny karazana zavatra tianao hatao tsy manome fanazavana be loatra an-tsaina tsara. Tsarovy, te-hitazona ny liana rehefa handefa mailaka sy miverina.
Raha ny Your Email:
Ankehitriny, raha mikasa amin'ny emailing ny hery anaty "daty", tokony ho fantatrao ny fomba manoratra ny mpamono fahatsapana voalohany mailaka. Izany no mandefa mailaka voalohany dia tsy maintsy ho mafana sy fanasana; izay tadiavinao mba hanehoana ny mpandray fa mahaliana ianao, ary tokony hahafantatra anao. Izany, inona no tokony ho tsapany voalohany, rehefa mitarika mailaka?
1 - Your Email fiarahabana
Rehefa hitanao ny mombamomba ny olona iray tianao, ary manapa-kevitra ianao te-handefa mailaka azy ireo, tokony ho fantatrao izay tokony holazaina mba ho lehibe ny Fiheveran'ny Olona Ahy. Tokony hanomboka ny mailaka manaraka izao eny amin'ny, "Arahaba, na hariva, na Hello (Solonanarana)". Aoka ho azo antoka fa ny olona dia tsara ny Username teny - hanoratra azy raha tsy maintsy. Izany karazana fanokafana tonga manerana ho mafana sy manintona.
2 - A fohy Serasera
Raha mikasika ny fanoratana ny tonga lafatra fahatsapana voalohany mailaka, indro misy tendron'ny ravin ilaina ny mitandrina ao an-tsaina: na inona na inona mihoatra ny telo andalana, ary tsy latsaky ny roa andinin-tsoratra. Na inona na inona fohy na levitra dia tsy mahazo valiny ianareo, ary na inona na inona ela loatra ianao dia midika hoe miezaka ho tonga manerana toy ny mamoy fo.
3 - Hitady Common Ground
Rehefa nijery ny mombamomba azy ireo, Azo antoka fa nanan-javatra iombonana ka manonona azy eo amin'ny mailaka. Raha ny zavatra hafahafa izay zavatra iombonan'ny roa, miteny aminy ny momba izany. Raha ry namana ny ankamaroan'ny dia jereo ny mombamomba rehefa mahazo mailaka avy aminao (ary eny, Tokony hilaza ny mombamomba ny zavatra tiany sy fialam-boly), tsy tokony miantehitra foana amin'ny ity.
4 - Milazà Profile-Detail manokana
By izao ianao tafita tsara ny mombamomba azy, ka rehefa manomboka manoratra ny mailaka, milaza zavatra voafaritra tsara momba izany. Diniho ny miresaka momba ny ho any izy ireo, na efa nisy izy ireo sarimihetsika Nahita, sns. ary ho tsara momba ny lohahevitra. Zava-dehibe fa mahita toy ny olona tsara, raha tianao izy ireo mba hamaly indray.
5 - Anontanio iray (Marina) Direct Fanontaniana
Tena tsara ny manontany ny fanontaniana mivantana iray monja ianao ka mahazo valiny indray. Fanontaniana be loatra dia azo heverina ho toy ny Nosy. Aoka ho azo antoka ny fanontaniana dia zavatra tsy mampaninona mamaly.
Zava-dehibe ianao, dia tadidio fa ny hanangana fahatsapana voalohany, na ny mombamomba sy ny mailaka mila mijery manasa - hankany izy roa tonta tamin'ny nify tsara tohotra, mitady fomba fanoratra sy ny fitsipi-pitenenana fahadisoana. Ho marin-toetra amin'ny roa lahy, ary rehefa manoratra fa mailaka voalohany, miala amin'ny ankapobeny vaovao - iza ianao, ny taonanao, raha efa nivady, manan-janaka, sns.
Voalohany dia tsy fahatsapana fotsiny ny endriny-tava fifandraisana intsony; ampiasaina ihany koa ry zareo an-tserasera. Mila fiomanana sasany, dia afaka mamorona fahatsapana voalohany izay mahazo ny valin izay tadiavinao.
6 Antony To Ataovy Down ny Cell Phone